अब निजी अस्पतालले कोरोनाको उपचार गराएको दैनिक १५ हजारसम्म लिन पाउने ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/अब निजी अस्पतालले कोरोनाको उपचार गराएको दैनिक १५ हजारसम्म लिन पाउने !
अब निजी अस्पतालले कोरोनाको उपचार गराएको दैनिक १५ हजारसम्म लिन पाउने !
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को उपचारका लागि नीजि अस्पतालले लिने शुल्कको मापदण्ड तोकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार वापत् न्युनत्तम दैनिक प्रति व्यक्ति तीन हजार पाँच सय रुपियाँ र अधिकत्तम १५ हजार नबढ्ने गरी तोकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
आदेशले सङ्क्रमितलाई अस्पतालमै भर्ना गरी उपचार गर्नुपरेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था सम्बन्धमा समेत सम्बोधन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा समेत उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
सामान्य लक्षण भएका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचार वापत् नीजि अस्पतालले दैनिक तीन हजार पाँच सय रुपियाँ लिने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम जटिल बिरामीको उपचार गरे वापत् नीजि अस्पतालले दैनिक सात हजार रुपियाँ लिन पाउनेछन् । त्यसैगरी, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता हुने कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार गरे वापत् दैनिक १५ हजारमा नबढ्ने गरी उपचार गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
तर मन्त्रालयले तात्काल उपचारका लागि निजी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध नगराउने प्रष्ट्याएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न चाहने बिरामीका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ का लागि सरकारी अस्पतालमा देशभरि दश हजार बेड क्षमता छ, त्यस अन्तगर्त शुल्क लाग्दैन ।” “निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको उपचार खर्चमा एकरुपता ल्याउन शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।”– डा. गौतमले थप्नुभयो ।
सरकारी अस्पतालको क्षमता पुरा भएपछि निजी अस्पतालमा भर्ना हुने अवस्थामा अहिलेको आदेश परिमार्जन हुन सक्ने उहाँले खुलाउनुभयो ।
विश्वब्यापी महामारीको बेला सरकारले कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको उपचारमा सहुलियत र एकरुपता ल्याउन यस प्रकारको मापदण्ड ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले भने कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार निशुल्क हुने यसअघि नै प्रयट्यास्केको छ। यद्दपी भुक्तानीको माध्यमबारे प्रष्ट गरिसकेको छैन्।-गोरखापत्रबाट
हावाहुरीका कारण २ बिद्यार्थी सहित एक महिलाको मृत्यु
सुनको कारोबार शुरु, तोलामा यति धेरै बढ्यो ,अहिले सम्मकै उच्च